မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): အင်တာနက်မှာ မိနစ် 20 အချိန်ပေးပြီးငွေရှာနည်း နှင့် PayPal Account သစ်ဖောက်နည်း
Author Myanmar IT Helper at 12:18:00 PM
Labels: အင်တာနက်ပေါ်မှာ ငွေရှာနည်းများ
The Bux က မရပဲနဲ့ 
visa card နဲ့မဟုတ်ပဲmaster ကဒ်နဲ့လည်း၇တယ် အပေါ်မှာပြောတာတခုကျန်သွားတယ် master ဆိုရင် ထိုင်းမှာလူတိုင်းကိုင်တယ် ငွေပို့ငွေလွဲလုပ်တာအားလုံးလုပ်လို့ရတယ် master မှာ scb လို့ရိုက်လိုက်ရင် နံပါတ်10 လုံးတောင်းတယ် ငွေလွဲနံပါတ်10လုံးပေးလိုက်ပေါ့ ဒါဆိုလွယ်လွယ်ထုတ်လို့ရပြီပေါ့တခါ 3သောင်းပဲထုတ်လို့ရတယ်
the bux တော့အဆင်ပြေသွားပါပြီး paypal အကောင့်ပဲဖွင့်ပို့ကျန်တော့တယ်
winner prize က position 1 to 50 ၀င်ရင် ဆုငွေကို ဘယ်မှာကြည့်ရတာလဲဆိုတာပြောပြပေးကြပါဦး......thank !!!!!!!!!
ShweMoney.com service is unavailable now. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Probux ,ဆိုတာလဲ​ကောင်းတယ်​ ​ငွေ​ပေးတာမြန်​တယ်​ သုံးရတာလဲလွယ်​တယ်​ စမ်းကြည့်​ပါ http://www.probux.com/?r=Thantzinoo26
The BUX ကို Register လုပ်တော့ Sorry IP is used by other member ဆိုပြီးတက်လာတယ် ပြန်ပြောပေးပါဦး
ငွေရှာတဲ့နေရာက The GRID,View Ads,Watch video and Earn အပြင်တစ်ခြားနေရာရှိသေးလားခင်ဗျာ။ Video လည်းကြည့်လို့မရသေးဘူး။နောက်ပြီး Referral ၀ယ်လိုက်ရင် မိမိ Account ထဲ့ ငွေဘယ်ကိုရောက်လာသလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ။
pay pal code number where do you save?
pyapal account မှာလေ activate မလုပ်ဘဲနဲ့ကော ငွေလက်ခံလို့ ရလား အကို
http://www.probux.com/ http://www.neobux.com/ http://www.twodollarclick.com/index.php?view=account&ac=overview&sid=TVM0d016TTFPVFF4TVRV&sid2=TVM0d&siduid=1727830& ဒီလင်သုံးခုလုံးမှာလဲငွေရှာလိုရပါတယ်စမ်သုံးကြည်ပါ
ဒီအကောင့်တွေထဲမှာ ၁၀ ဒေါ်လာလောက် ရနေတဲ့သူရှိရင် ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ချင်လို့ပါ...paypal ထဲကိုပိုက်ဆံဘယ်လိုထည့်၇မှန်းမသိလို့ပါနော်
The Bux ကမရဘူးလို့ပြောနေကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မသိဘူး။စလုံးမှာ ကတော့ ကျွန်တော်လဲ မရလို့။ နောက်တော့ username ကို အတိုကောက် စာလုံး သုံးလုံးပေါင်း ပြောင်းပေးလိုက်တာရသွားတယ်။ bob တို့ doc တို့လိုပေါ့ဗျာ။တခြားပုံစံလေးတွေလည်းစမ်းကြည့်ရင်ရမှာပါ။ကျန်တဲ့တချို့ဆိုဒ်တွေလည်းမရလို့ အဲလိုပြောင်းပေးလိုက်တာအဆင်ပြေသွားတယ်။
outbux နဲ့ Nerdbux ကတော့ ပြောင်းစရာမလိုပါဘူး။
ဖွင့်လို့ ရတာ မရတာကိုပြောတာပါ။
Clixzor ကောင်းပါသည်။ Clixsense နဲ့ Probux မကောင်းပါ။ ကလစ်သူတိုင်း သိပါလိမ့်မည်။ Clixsense,Probux Tab နှစ်ခုကို ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ပြိုင်တူနှိပ်လို့ မရပါ။ တစ်ခု ဘားတန်းပြည့်လိုလျှင် ထိုတစ်ခုကိုသာ ထိုင်ကြည့်နေရပါလိမ့်မည်။ အခြားဆိုဒ်များကတော့ တန်းစီပြီး နှိပ်သွားလို့ရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘဏ် krungsri (first choice) visa ကဒ်နဲ့အသုံးပြုပုံလေး သိတဲ့သူများရှိရင် ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်
stuck at send ,,when i withdraw. anyone pls tell me what i have to do,,tnks
အကို ကိုအောင်ချို ကျွန်တော့်မှာ paypal account ရှိပါတယ်။ မလေးမှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ VISA card နဲ့ အသုံးပြုဖို့ရာအတွက် card number ကိုတောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး csc လဲတောင်းပါတယ်။ ဘဏ်အကောင့်လဲမဟုတ်ဘူး။ ဘဏ်ကဒ်ပေါ်က နံပါတ်တွေတော့ရှိတယ်။ ကျောဘက်မှာလည်း နံပါတ်၃လုံးလည်းတွေ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေက card number နဲ့ csc လားအကို။ ပြောပါအုံးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သိတဲ့ညီအစ်ကိုများရှိရင်လဲ ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။ အားလုံးလဲ သိခွင့်ရအောင်ပါ။
The Bux မှာ ရှယ်ယာဝယ်မရဘူးဖြစ်နေလို့ ပါ .....
တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ် KBZ ဘဏ်မှာ paypal ကတ်လုပ်လို့ရလား ..ဘယ်မှာလုပ်လို့ရလဲ.ညီကအင်တာနတ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတော့လုပ်ချင်တယ်..ဘဏ်ကကတ်က မရှိလို့
အကို Register လုပ်နည်းမေးပို့ပေးပါလားဟင်